Waaheen Media Group » ISKU SHAANDHAYNTA: From Bashiir to Biixi. Home
Browse:Home Articles ISKU SHAANDHAYNTA: From Bashiir to Biixi.	ISKU SHAANDHAYNTA: From Bashiir to Biixi.
0 Comment	Xukuumaddii waa la isku shaandheeyey oo haddana la kala shaandheeyey. Dadka golaha iskugu imanayaa ma yihiin dad is qabanaya? Mise waa qaar Jabaaniis ku hadlaya sida Bashiir Xariir iyo qaar Ferenji ku hadlaya sida Maxamed Biixi? Tolow side bay isku af garan, yaa tarjumaan u noqon? .yaa dooda ku guulaysan doona? Ma inta badan eek u faraxsan ee meesha hunguriga u joogta mise inta yar ee waxqabp is leh ee jidkii maxamed xaashi iyo gaboose mari doonta sida maxamed Biixi?